Milan Ku Roma NeTrenitalia Zvitima Mukati 3 Hours | Save A Train
musha > Travel Europe > Milan Ku Roma NeTrenitalia Zvitima Mukati 3 Hours
Milan kuRoma By Train kana kuRoma kuti Milan ndiyo ruzivo nyore uye akarongeka. Tisingatauri yakanaka! Unogona kutora isingadhuri chitima izvo zvinogona kutora nguva yakareba kupfuura 3 Maawa asi izvo Zvitima kubva kuMilan kuenda kuRoma zvinokubvumira kuti usvetuke kubva Kumira zvakafanira kuongorora. Kana iwe unogona kusvetuka pasingamire Trenitalia yakakwira-inomhanya Freccia chitima, izvo zvinotora chete 3 maawa uye 3 maminitsi, zvakaderera pane yerwendo rwakazara nendege! Chero iwe chaunofunga ichi chinokurumidza gwara kuchakubatsira iwe mukuita sarudzo yakanakisa iwe nerwendo rwako!
Travel mufambo: 297 zvemakiromita
uchitsanya nguva: 3f:03M
Daily nezvitima: 89
Dzidzisa Matikiti eMilan kuenda kuRoma kutanga kubva :$51
Best Train Ticket Provider: Save A Train of course
Nyaya iyi yakanyorwa kudzidzisa pamusoro Train Travel uye chakaitwa Sevha Chitima Webhusaiti Munyika.
Milan To Rome By Train & Rome To Milan By Train: The Scenery
Gadzirirai kuona zvimwe hunoshamisa zvechokwadi girl sezvo imi makatasva kumaodzanyemba kuburikidza Italy Lombardy, Emilia Romagna, uye Tuscany kumatunhu. Vazhinji AV Arrow Trenitalia anodzidzisa rurege muna Bologna, Padua kana kuGenoa munzira kuenda kuRoma. On the nokukurumidza pakutengeserana, iwe haungaiswi inodiwa neshanduko nezvitima. zvisinei, kana uri kufamba nomumugwagwa kwaitora nguva uye kudhura remunharaunda chitima, ungafanira uchatamisa kubva chitima mumwe. Kana usingagone nhokwe uye uchida kunyatsoshandisa yenyu Milan kuRoma By Train rwendo, zvino tingadai kuvakurudzira nezvechisarudzo ichi. Heano huru!
With kuMilan sezvo rayo guru, hazvishamisi kuti vaenzi anodirana mumamiriyoni yavo Lombardy rimwe gore. Asi mhiri fashoni kufarira, zvizhinji kupfuura vanofanira-kushanya akakwirira Lombardy munharaunda Italy vari kudanidzira kushanyirwa.
Pane zvinhu zvakawanda zvokuita munzvimbo iyi; kumuyemura mungarava nematende mu wakajeka madhamu, kushanyira gitare mumawekishopu mumaguta zvenhau, being amazed at the art and architecture of Mantua – Lombardy really packs a punch for visitors.
Milan kuenda kuMantua chitima chechitima
Turin kuenda kuMantua chitima chechitima
Padua kuenda kuMantua chitima chechitima
Venice kuenda kuMantua chitima chechitima
tinotenda Emilia Romagna nyore machisi ari zvinokwezva zvakawanda rakakurumbira Tuscany uye Lombardy uye inopa temptingly inokwanisika nzira kudya panze uye pokugara. Ndizvo ari Milan kuRoma By Train rwendo chakavanzika kwazvo mumaonero edu asiwo Roma kuMilan nechitima! Kusvetuka panzvimbo ino uye uende kuongorora!
Bolognia kuna Modena Zvitima
Venice kuna Modena Zvitima
KuGenoa kuna Modena Zvitima
Florence kuna Modena Zvitima
Kune zvinhu zvakawanda kudaro kuita Bologna paaifamba kubva Milan kuenda kuRoma neTrenitalia Zvitima. Tinoratidza ichi somumwe kumusoro mavara kuti funga nokusvetuka pa. Vanokwira Ages shongwe, bhuku Tours mafaro chikafu. Kana uchida kugara chinguva chiduku ichi anoita nechimwe mukuru kuongorora dzimwe zvinokwezva munzvimbo.
Venice kuenda kuBologna chitima chechitima
Florence kuenda kuBologna chitima chechitima
Roma ku Bologna chitima chechitima
Milan kuenda kuBologna chitima chechitima
Asingasviki maminetsi makumi matatu kukwira pa kumhanya chitima kubva Venice, Padua iri kazhinji kuteerera kubva ruzhinji Vashanyi. asi, zvinoita kuti zuva guru rwendo kubva Venice, kupa zvishoma kupinda akapfuma munhoroondo muguta kuti kamwe aiva Tauriranai simba.
Home kuti yunivhesiti wechipiri dangwe Italy raMwari, rakavakwa 1222, Padua akaita rakaramba vivacious kuitika taundi rine yunivhesiti, ne upenyu piazzas uye arcaded migwagwa, zvizhinji cafes namazariro umo ubiquitous Spritz ndiye of rigueur sezvo zuva mhepo kupinda manheru. Wana!
Milan kuna Padua Zvitima
Verona kuna Padua Zvitima
Bologna kuna Padua Zvitima
Bergamo kuna Padua Zvitima
Nokuti munhu aifamba Milan kuenda kuRoma neTrenitalia Zvitima kana iyo imwe nzira yakatenderedza nzira uye iri kutsvaga layered zvakadzama, kazhinji isina kuvezwa, uye neushingi ichokwadi ruzivo pakufamba.
Tinokurudzira kuti uende kuGenoa (iyo kufanana Venice aimbova nepagungwa zvokuvhoterwa simba) fronting Gungwa Ligurian. Kupa zvimwe mbishi uye chaivo ruzivo, vawane undiluted pfungwa kare, uye ruzivo rweguta rakapfuma hunyanzvi uye kosha akitekicha. One of the top reasons we enjoy it so much is that pane unyanzvi hukuru uye mamiziyamu vari uncrowded! Unogona kuwana mabasa kubudikidza Caravaggio, Van Dyck. Rubens, Durer uye Veronese muna Palazzo Bianco uye Palazzo chile uye ogle nevamwe Old World ounyanzvi mu varipo zhinji, kufanana Royal Palace uye National Gallery of Palazzo Spinola. Panewo mienzaniso yakanaka pamusoro Genoese School ounyanzvi, vakakurumbira muzana remakore rechi17, muna Palazzo Blanco.
Milan kuGenoa Zvitima
Rome kuGenoa Zvitima
Florence kuGenoa Zvitima
Venice kuGenoa Zvitima
Trenitalia yakakwira-mhanyisa Kumhanya-kumhanya (OF) nezvitima siya Milan Central Station kamwe kana kaviri paawa kuRoma termini chiteshi - avhareji 90 nezvitima pazuva. The tanga Trenitalia chitima mashizha Milan Central Station pa 5:00 a.m. Wokupedzisira chitima kuRoma anosiya Milan pa 11:18 p.m.
Ona kuti kwevhiki uye mazororo yemanyorero kureva zvishoma kakawanda basa uye dzimwe nguva refu nguva kufamba.
Milan kuenda kuRoma chitima chechitima
Roma kuenda kuMilan tikiti rechitima
Zvimiro Zvekushandisa PaFreccia Zvitima Pakati paMilan <> Rome
Vazhinji Trenitalias Frecciargento AV nezvitima kuti nezuva rwendo pakati kuMilan uye Rome mune chete 3 maawa uye 3 maminitsi, kufamba kusvika 155 zvemakiromita / 250 makiromita paawa.
Itari yakakwira-kumhanya matikiti ezvitima ane makuru ekuwedzera. Mahotera emagetsi pachigaro chako kubhadharisa michina pamwe neWiFi yakakwira zvitima zveFrecciarossa neFrecciargento. zvisinei, chiratidzo chinodonha iwe uri mukati tunnels uye pazviteshi. Iwe unogona kuva neiyo huru Italian cafe mumoto wekudya paneese chitima. Uyewo zvokudya ngoro rinounza nezvikafu zvishoma, sandwiches, uye zvinwiwa kuti chigaro chenyu. Panoperera motokari nechimwe, muchawana restroom uye zvakawanda Racks kuti chitoro guru mukwende.
Kugadzirira kurongedza mabhegi ako uye kuongorora Milan kuenda kuRoma NeTrenitalia Zvitima kana iyo imwe nzira yakatenderedza – Roma kuenda kuMilan neTreni mukati 3 Hours? Chero sarudza, Bhuka matikiti ako echitima mumaminitsi nerubatsiro rwe Save A Train!
Unoda embed yedu Blog romukova “Milan Ku Roma Ne Trenitalia Zvitima” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmilan-rome-train%2F%3Flang%3Dsn – (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Belgium, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Chitima Kufamba Hungary, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba Luxembourg, Chitima Kufamba Switzerland, Rovedza Kufamba Matipi, Travel Europe
Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Belgium, Train Travel Czech Republic, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Train Travel Holland, Chitima Kufamba Switzerland, Train Travel The Netherlands, Rovedza Kufamba Matipi, Chitima Kufamba UK, Travel Europe